Ismaamul Goboleedka Soomaalida Itoobiyo iyo Maamul Goboleedka Galmudug oo Heshiis Gaadhay – WARSOOR
Jigjiga – (warsoor) – Shir lagu soo gunaanaday dagaal dhex dhawaan dhex maray ciidamo ka kala tirsanaa Ismaamul Goboleedka Soomaalida Itoobiyo iyo Maamul Goboleedka Galmudug oo ka dhacay deegaanka Daac-dheer ayaa laga gaadhay heshiis, ka dib xulan saddex geesood ah oo shalay ka dhacay magaaladda Jigjiga.
Shirkan oo gogosha dhigay madaxweynaha Ismaamul goboleedka Soomaalida Itoobiya kana soo qayb-galay madaxweynayaasha maamul-goboleedka Jubbaland iyo Galmudug.
Shirkan ayaa la isku afgartay in laga heshiisyo isku dhex ku dhex maray ciidamada maamul goboleedka Somalilad Itoobiya iyo kuwa maamul goboleedka Galmugud.
Madaxweynaha Maamul-goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe oo dhexdhexaadinaayey labadan maamul ayaa heshiis dhex dhigay madaxweynaha Ismaamul goboleedka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamud Cumar iyo madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen, waxaana lagu heshiiyey in nabad-galyadda laga wadda shaqeeyo colaad dabe oo dhex marta dadka deegaankaasi dagan.
Guddoomiyaha KULMIYE oo Si Indheergaradnimo Ah Uga Hadlay Muhiimada Diiwaangelinta